နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘိုးတော်နဲ့ မော်ဒယ်ဗွီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့မှု - CeleLove
ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဘိုးတော်လူထွက်နဲ့မော်ဒယ်အမျိုးသမီးကို ဖမ်းဆီး လိုက်ပြီး အမှုနှစ်ခုနဲ့တရားစွဲလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ် …. ။
ခုလို အွန်လိုင်းဆိုင်ရာ ထိမ်းချုပ်မှု ဥပဒေအရ ခုလိုအမှုကို ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်ပါတယ် …. ။
ထိုငျးရဲတပျဖှဲ့က ဘိုးတျောလူထှကျနဲ့မျောဒယျအမြိုးသမီးကို ဖမျးဆီး လိုကျပွီး အမှုနှဈခုနဲ့တရားစှဲလိုကျပွီလို့ သိရပါတယျ …. ။
ခုလို အှနျလိုငျးဆိုငျရာ ထိမျးခြုပျမှု ဥပဒအေရ ခုလိုအမှုကို ထောငျဒဏျ (၅) နှဈအထိ အပွဈပေးနိုငျပါတယျ …. ။